Ny fihaonana ny roa tonta Commission - ny famintinana ny fanambarana - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ny fihaonana ny roa tonta Commission - ny famintinana ny fanambarana
Teo amin'ny roa tonta Vaomieran'ny delegations ny Vaomiera ny Hl fivoriana
Seza ho an'ny ara-pivavahana fifandraisana amin'ny fivavahana jiosy sy ny lohan 'ny Rabbinate' i Isiraely, ny fifandraisana amin'ny Fiangonana Katolika - Fanambarana ny vita.
Nandritra ny Fivoriana fahenina ny roa tonta Vaomiera natao tao Roma, dia tsy maintsy raisina ny foto-kevitra ny fifandraisana eo amin'ny olombelona ny fiainana sy ny teknolojia, amin'ny fahatsiarovan-tena ny fandrosoana lehibe izay efa natao fanafody, ary koa ireo fanamby sy fahafahana izy ireo dia hampidi.
Isika manamafy ny fitsipiky ny tsirairay, fomba fanao ara-pivavahana, araka izay Andriamanitra no ilay Mpahary sy tompon'ny zavatra rehetra ny fiainana sy ny olombelona ny fiainana masina, satria, araka ny ampianarin'ny Baiboly, ny maha olona ny Olona dia nohariana araka ny endrik ' Andriamanitra (cf., Gen, -). Manapa-kevitra noho ny zava-misy fa ny fiainana dia fanomezana avy amin 'andriamanitra izay miaro sy fikarakarana tsy maintsy ho raisina mba hanary, nanapa-kevitra izahay ny hevitra hoe fanjakana tan' ny vahoaka nandritra ny fiainana na ny Tsara na ny olona na ny vondron'olona iray, momba ny lanjany na ny faharetany. Noho izany, izahay dia mandà ny foto-kevitra ny mpanao euthanasia ho tsy ara-dalàna Pretensions ny olona mba hamaritana ny fotoana ny fahafatesana ny olombelona Olona, inona afa-tsy ny Herin ' Andriamanitra. Misaotra ny Mpamorona fa efa nomena ny olona ny fahafahana hanasitrana sy hiaro ny fiainana, sy ny ho manan-danja ny fandrosoana fa efa nanao izany ny fanajana ny siansa, ny fitsaboana sy ny teknolojia ankehitriny. Na dia izany aza, miaiky isika fa tsara ny fandrosoana dia hitondra bebe kokoa ny andraikitra, lalina ny etika zava-tsarotra sy loza mety. Izany toe-javatra izany, dia manasongadina ny Fampianaran ' ny razany lova, araka izay rehetra maha-olombelona ny Fahalalana sy ny olombelona sy ny fahafahana no tsy maintsy ampiasaina mba hampiroboroboana ny fiainana sy ny maha-izy azy ny olona, ary tokony hifanaraka amin'ny soatoavina ara-pitondrantena, izay homarinana avy amin'ny voalaza etsy ambony fitsipika. Noho izany, dia tsy maintsy ho ao amin'ny fankatoavana ny zava-misy fa tsy izay rehetra ara-teknika azo atao ihany koa ny ethically azo ekena dia, fetra ao ny ara-tsiansa sy teknolojika ny fampiharana. Ny fanajana sy ny fikarakarana ho an'ny olombelona ny fiainana dia tsy maintsy ho manerantany ny fitondran-tena filaza mandidy fa isaky ny fiaraha-monim-pirenena sy ny lalàna, hampiroborobo ny kolontsaina ny fiainana.
Koa any amin'ny fandavana ny fieboeboana ' ny vahoaka fa maka ny tombontsoa manokana avy amin'andriamanitra mba hamaritra ny fotoana, ny fahafatesana, fotoana ny milaza, dia tsipiho ny adidy mba hanao izay rehetra azo atao mba hanome ny olombelona Mijaly ny fikambanana.
Isika dia mamporisika ny fitsaboana ny mpiasa sy ny mpahay siansa, fa ny olana rehetra momba ny fiainana sy ny fahafatesana, sy ny fahendren ' ny Fivavahana. Noho izany, dia manoro hevitra fa ao amin'ireo zava-dehibe ny fakan-kevitra tsy amin'ny tsirairay, ny fianakaviana, fa koa amin'ny mahefa ny manampahefana ara-pivavahana no hatao. Ny tena Finoana fa ny fiainana izany Tany, raha ny marina, afa-tsy ny ampahany amin'ny fisian'ny olombelona, dia tsy maintsy hitondra antsika, ny mifanohitra amin'izany, ny lehibe indrindra mitandrina mba hiarovana izany manohitra ny ivelany "akorany" - ny olombelona endrika - izay ny Olona iray dia eto amin'ity tontolo ity ny azo tsapain-tànana ny zava-misy. Noho izany, izahay dia mandà tanteraka ny hevitra hoe ny fotoana voafetra ny maha-olombelona sy ny fisiana eto an-tany afaka mamela antsika mba manararaotra ity.
Ao anatin'ity resaka ity, isika dia manameloka ny fandatsahana ny mafy na inona na inona ny ra, fa dia ny fampiroboroboana ny ideolojia ny tanjona - indrindra fa raha izany no hatao amin'ny anaran'ny Fivavahana.
Izany fihetsika izany dia tsy hafa noho ny profanation ny Anarany masina. Noho izany, dia miezaka hanatratra ny fandrosoana ny maha-olombelona ho amin'ny soa iombonana ny alalan 'ny fampiroboroboana ny fanajana manoloana an' Andriamanitra, manoloana ny Fivavahana sy ny marika, manohitra ny Fanahy toerana sy ny toerana ny vavaka. Mandritra izany fotoana izany toy ny fanararaotana sy ny fihenjanana misy eo amin'ny kolontsaina hanao izany dia ilaina fa tsy hihoatra ny roa ny fifanakalozan-kevitra, dia manana manokana andian-jiolahy voatery. Noho izany, mino isika fa ny adidintsika ny miezaka, eo amin'ny izao tontolo izao ny Silamo sy ny mpitarika ao manaja ny fifampiresahana sy fiaraha-miasa. Ankoatra izany, dia miantso ny olona Lehibe amin 'izao tontolo izao, ny tsara amin' ny Lafiny ara-pivavahana mba manaiky fa mandray anjara amin'ny vahaolana ny ady sy fifanolanana, sy ho anao izahay kosa miaraka amin'ny fangatahana fanohanana ny adim-pivavahana ny fifanakalozan-kevitra.
Fiarahana ho An'ny Fifandraisana: Kely Any Asia
Video Chat. Bez nápisu.
video firesahana amin'ny aterineto tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana Chatroulette tsy misy dokam-barotra Fiarahana ho maimaim-poana. ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka video Mampiaraka online no fisoratana anarana maimaim-poana ny lahatsary amin'ny chat tsy voafetra ho maimaim-poana maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ny lahatsary amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy maimaim-poana tsy an-kanavaka tsotsotra lahatsary Mampiaraka maimaim-poana ny Fiarahana